Soro Ngwa Ahịa Apple echegharịrị site na ntụgharị Tracker | Esi m mac
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Apple Store, Noticias, ọtụtụ
Na ibe a anyi agwala gi okwu otutu oge banyere ngwaahịa arụgharịrị ọhụrụ dị na Storelọ Ahịa Apple. Ha bụ ngwaahịa laghachiri na ụlọ ahịa ahụ n'ihi ọnọdụ dị iche iche: anyị anwalela ngwaahịa a ma anyị enweghị mmasị na ya, ọ nwere ntakịrị nrụpụta nrụpụta ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ọzọ. Ya mere, ọtụtụ n'ime ngwaahịa Apple dị maka ire ere ọzọ, yana ndegharị dị mkpa, na mbelata ego. Ihe atụ ikpeazụ bụ ire nke ikpeazụ Emegharịrị 2016 MacBook Pro, ma ọ bụ naanị ọnwa 5 ma ọ bụ 6 ka emechara ya.
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya anyị achọtala peeji ndị na-egosi ngwaahịa nke ngwaahịa na Storelọ Ahịa Apple. Taa, anyị na-ewetara peeji Ntughari Tracker, que na-agwa anyị mgbe ngwaahịa anyị na-achọ na-egosi na a ụfọdụ Apple Store. Anyị agaghị ahụ nnukwu onyonyo ma ọ bụ ihe eserese na ibe a, mana ọ karịrị imezu ebumnuche ya. O nwere ike ịchọta ihe ọ bụla anyị na-achọ. Site na iPods na Mac Pro, site na ngwa. Mana ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwaahịa achọrọ n'oge a ma ọ bụ na ịchọrọ ichere iji nweta ọnụ ala, tinye email gị ma ị ga-enweta ozi ọma banyere ngwaahịa a.
Ọrụ ahụ dị mfe. Nke mbụ anyị na-ahọrọ obodo ebe anyị chọrọ ịme ọchụchọ ahụ. N'okpuru ebe a bụ ụdị dị iche iche nke ngwaahịa Apple. Anyị nwere ike ikwu na ha niile.
Nhọrọ nzacha bara ezigbo uru. Ka anyị cheta na Mac ọ bụla nwere aha a kapịrị ọnụ, ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na 5 ″ retina 27k ihuenyo iMac na Intel Core i7, ihe nlere a nwere akwụkwọ GOSCAY / A. Na-achọ akwụkwọ a, anyị ga-enweta nsonaazụ anyị.
Ikekwe naanị mmelite m ga-agwa ndị okike ya bụ inwe ike inyocha site na Storelọ Ahịa Apple ụfọdụ, ịzụta ngwaahịa ahụ kpọmkwem na Storelọ Ahịa Apple, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịtụ ya mgbe niile n'ịntanetị ma nata ya na Storelọ Ahịa Apple kachasị amasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Soro Ngwa Ahịa Apple echekwara site na Tracker Refurb
Agba na eserese na-enweghị nsogbu na Patina, ugbu a na-ere obere oge
Apple nwere mmasị ịzụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 3.000 square na obodo Reno